Xiisad saaka ka taagan degmada Caabudwaaq, kadib dilal shalay ka dhacay – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xiisad halkaas ka jirto, iyadoo laga cabsi qabo dagaal dhex mara maleeshiyaad ka soo jeeda degmada.
Illaa afar ruux ayaa shalay siyaabo kala duwan loogu dilay degmada Caabudwaaq, waxaana dillkooda uu salka ku hayaa aanooyin qabiil.
Waxaa saaka xiran ganacsiga qaar, waxaana dadka deegaanka ka cabsi qabaa in mar kasta uu dhaco dagaal, maadaama labada dhinac ee xiisada u dhaxeysa ay wadaan hub uruursi.
Maamulka deegaanka ayaa ku baaqay in xiisada ka taagan degmada la soo fara geliyo, inta aanay faraha ka bixin, waxaana la dareemayaa abaabul iyo dhaq dhaqaaqyo ay wadaan labo maleeshiyo oo shalay dad iska dilay.
Degmada Caabudwaaq ayaa waxaa horay uga dhacay dilal ku saleysan aanooyin qabiil, waxaana horay uga dhacay dagaal ka dhashay gacan ku heynta deegaanka oo dhex maray Galmudug iyo Ahlusuna